मिडोरी ब्राउजर: किनकि सबै फायरफक्स र क्रोमियम होइन लिनक्सबाट
मिडोरी ब्राउजर: किनकि सबै फायरफक्स र क्रोमियम होइन
म सँधै एक प्रयोगकर्ता भएको छु फायरफक्स (र मलाई लाग्छ कि म लामो समय सम्म रहन्छु), जबकि म समय-समयमा प्रयोग गर्छु ओपेरा y क्रोमियम.
तर हामी प्राय जसो अन्य विकल्पहरू बिर्सन्छौं Midori, एक सानो ब्राउजर जो यसको फाइदाहरूको लागि अनुयायीहरू प्राप्त गर्दैछ, र अचम्म छैन। व्यक्तिगत रूपमा म मात्र यसलाई २ शब्दको साथ योग्य बनाउन सक्दछु: अल्ट्राफास्ट y हल्का.
यदि तपाईंलाई लाग्छ म बढि बढाइ गरीरहेछु र प्रयोग गर्दैछु डेबियन परीक्षण, तिनीहरूले भर्खर एउटा टर्मिनल खोल्नु पर्छ र टाइप गर्नुहोस्:
र तपाईले देख्न सक्नु हुन्छ म के कुरा गरिरहेको छु।
अहिले म यो पोष्ट लेख्दै छु मिडोरी ०..0.4.1.१ र हिम्मत म भन्न, कि म यो भन्दा धेरै छिटो याद ओपेरा-नेक्स्ट 12, क्रोमियम। 14 y फायरफक्स 7.0.1.
ठीक छ, यो पनीशिया पनि होइन। यससँग धेरै थोरै एक्स्टेन्शनहरू छन् र कहिलेकाँहि व्यवहारमा सानो विवरणहरू छन् जुन मलाई अलिक मनपर्दैन। इन्टरफेस धेरै समान छ क्रोमियम, यद्यपि eyelashes धेरै तंग महसुस (हुनसक्छ यो gtk थिम हो), तर केहि पनि सहिनु हुँदैन। र जब ड्यासबोर्डमा छविहरूसँग काम गर्दै WordPressबराबर छ ओपेरा असहनीय।
तर यी सबै वेब पृष्ठहरू लोड गर्दछ कसरी छिटो द्वारा उचित गर्न सकिन्छ। वास्तवमा म धेरै पहिले ए मा सम्झना छैन एसिड टेस्ट, यो अन्य ब्राउजरहरू भन्दा राम्रो देखा पर्‍यो। र साथै स्रोतहरूको कम खपत संग।
मिडोरीमा धेरै खोज इञ्जिनहरू, एक एकीकृत मेनू सहित समावेश छ क्रोम, र यो एक साधारण तरीकाले कन्फिगर गर्न सकिन्छ, यसको व्यवहार रूपान्तरण ताकि यो अन्य ब्राउजर जस्तै मास्क गरिएको छ। यो प्रयास गर्नु र यसलाई एक विकल्पको रूपमा स्थापित गर्न लायक छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: लिनक्सबाट » aPLICACIONES » मिडोरी ब्राउजर: किनकि सबै फायरफक्स र क्रोमियम होइन
मिडोरीले जहिले पनि मलाई समस्याबाट हटाउँदछ जब मसँग सुस्त पीसी हुन्छ, स्लाट्याज डिस्ट्रोमा उनीहरूले यसलाई डिफल्टको रूपमा डिफल्ट ब्राउजरको रूपमा समावेश गर्दछ। यदि मैले सहि सम्झना गर्दछु भने, यससँग एडब्लक प्लगइन र अन्य आधारभूत विकल्पहरू छन् जुन उनीहरूलाई सक्रिय बनाउँदा केहि बढी पूरक हुन्छ। यहाँ डेडेलिनक्समा मिडोरीमा स्पेस समर्पण गर्न राम्रो छ, अभिवादन! 🙂
मैले हेरिरहेको छु कि त्यहाँ त्यहाँ एक प्लगइन छ जसको कार्य हो प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको प्लगइनहरू, वा तेस्रो पार्टी प्लगइनहरू सम्मिलित गर्ने मौका दिन (मैले कल्पना गरेको)। यो फायरफक्स, क्रोम र ओपेरा को एक शक्ति हो, जसले धेरै ढिलो महसुस गरे।
मैले भर्खर ह्विजीमा मिडोरी स्थापना गरें तर जब म बुकमार्क थप्न चाहान्छु ब्राउजर बन्द हुन्छ, तपाईंलाई यो समस्या छैन?
सटीक मलाई पनि त्यस्तै हुन्छ
मिडोरी १००% स्थिर ब्राउजर होईन, यो तपाईको समस्या होइन, तर ब्राउजरको हो
सटीक यहाँ त्रुटि छ जुन मलाई दिन्छ:
Lawliet @ डेबियन भन्यो
वास्तवमा, म अहिलेको लागि मिडोरी प्रयोग गर्दैछु, मलाई कुनै विचार छैन कि कुन वेब ब्राउजरले मलाई पत्ता लगाउने छ, तर स्पष्टतः मैले प्रयोग गरेको डिस्ट्रोले मलाई पत्ता लगाउँदैन।
डेबियनसँग आएका मिडोरीमा समस्या आएको थियो जुन समाधान भयो जब मैले यसको आधिकारिक वेबसाइटबाट भर्खरको संस्करण कम्पाइल गरे, म यसलाई सिफारिस गर्दछु।
जापानी मिडोरीमा पनि हरियो अर्थ हुन्छ,
Lawliet @ debian लाई जवाफ दिनुहोस्
हामी पतनको पछाडि देखिरहेका छौं
जिनोम 3.2.1.२.१: मात्र प्याकेज / मोड्युल फिक्सहरू